Sei Pinterest Inogona Kundibetsera Nhasi? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 539
Akasiyana mapuratifomu ekutaurirana akavandudza nzvimbo yavo yekupa vashandisi zvakanakisa mazuva ese. Nekudaro, Pinterest rave riri rimwe remapeji akachinja kuti ape ruzivo inogara nekusingaperi kune vanhu vese uyo akafunga kujoinha.
Kunyangwe vazhinji vasingazive zvese zvakanaka izvo zvinogona kuunzwa naPinterest nhasi, chishandiso chine zvinhu zvinokutendera kuti uvandudze pasirese mune bhizinesi, zvemagariro uye kunyangwe iyo nyaya yekukutungamira iwe mumibvunzo yemazano pane akasiyana misoro.
Naizvozvo, Pinterest ine zvakawanda zvinhu zvinoendera izvo zvinoita kuti ive imwe yemapeji anokwezva ekuita akasiyana mabasa nhasi. Izvo zvisingakupe pfungwa yekushandisa ndeiyi funga iyo peji seinjini yekutsvaga yezvirongwa zvenguva yemberi, nekuti izvi zvine zvakawanda zvekupa.
Pinterest semubatsiro wezvemari
Hazvisi chakavanzika kune chero munhu kuti zvinhu zvachinja nekuda kwezera redhijitari uye pamusoro pezvose, maererano nekutaurirana. Vanhu vanosarudza kuita vhidhiyo kufona kuti vavhare madhiri pane kuenda kumisangano yakareba uye inonetsa iyo kazhinji isingasiye pfungwa izere yezvavanoda.
Pamberi peizvi zvese, Pinterest rave iro zano-rinokurudzira peji kuitira kuti vanhu vari kutanga yavo yekuyedza kuyedza vawane zvese zvavanoda munguva ipfupi inogoneka nguva. Nekudaro, izvo zvinodikanwa kuti vashandisi vari mubvunzo vaise simba ravo rese kuti vawane kuita kwakadai.
Pane zvakawanda zvakanaka?
Mhedzisiro yacho inoenderana chete nebasa iro vanhu vanoda kupa nhasi. Muchokwadi, vashandisi vanowanzo fanirwa kutsvaga zvakanyanya nzira yekuenda nehutachiona kuburikidza nezvakataurwa zvinhu.
Kune hunyanzvi hwe kushandiswa kwePinterest senge Networking chikuva Asi zvese zvinoenderana nesimba rauinaro kushandisa nzira idzi nhasi.
Zvakanakira kushandisa Pinterest nhasi
Haasi ese mapeji paPinterest ane zvakawanda zvekupa mazuva ano. Zvisinei, nekuda kwesarudzo huru, zvinhu zvakaonekwa zvinopa vashandisi mukana wekushandisa.
Gadzira hunyanzvi hwako hwePinterest
Vanhu vakazvipira mukugadzira mapurojekiti, zvirongwa uye mazano vane mukana wese wekusiira ruzivo rwavo pane peji kuenda batsira vamwe. Nekuda kweizvi, vazhinji vakavandudza mune zvavo zviwanikwa uye vanogona kupupurira kushandurwa kumakambani madiki uye makuru izvo kurota kwavo kwave nako.
Kura zvemari paPinterest
Vashandisi vanogona kuratidza mazano avo uye kunyangwe vatengese kuburikidza nePinterest kuzadzisa mari iri nani. Nekudaro, kushandira pamwe nevechitatu mapato zvakare izano rakanaka rinozounza mhedzisiro.
Tsvaga kubatana paPinterest
Makambani ane simba rekuwana akanakisa makambani paPinterest kuve imwe yesarudzo dzemubatanidzwa. Nekuda kweizvi, ivo vakwanisa kushanduka pamwe uye munzvimbo yekugadzira.
Makambani mazhinji akatoratidza kuti nekuda kwekubatana pakati pemakambani vanovandudza chimiro chavo pamberi peveruzhinji.
1 Pinterest semubatsiro wezvemari
1.1 Pane zvakawanda zvakanaka?
2 Zvakanakira kushandisa Pinterest nhasi
2.1 Gadzira hunyanzvi hwako hwePinterest
2.2 Kura zvemari paPinterest
2.3 Tsvaga kubatana paPinterest